unyaka 1 5 edlule #924 by mickod88
Ngobusuku noFuthi Bantu abathintekayo !!
Ngibe yilungu le-Rikoooo manje ngezinyanga ezingaphezulu kwe-6, ekugcineni ngaqala ukuzethula njengoba ngingisekho manje manje ukuze ngithole isikhathi esihle se-P3D ngaphansi kwebhande lami futhi!
Igama lami nginguMick, futhi ngivela eLossiemouth eScotland, okwamanje ngisebenza njenge-Avionics Technician ne-RAF. Ngibheke phambili ekufundeni okuningi mayelana ne-P3D kusuka kwabanolwazi abanolwazi futhi ngethemba ukuthi ngabe ngidlulisela kolwazi lwami kwamanye ama-newbies esikhathini esizayo.
Ngiyabonga wathola: 23
unyaka 1 5 edlule - unyaka 1 5 edlule #925 by rikoooo
Siyakwamukela esithangamini, siyabonga ngokuzethula.
Ngithemba ukuthi uzokujabulela lesi sithangami, sonke isithangami sisha futhi sidinga imisebenzi ethile ngakho sicela ungangabazi ukuthumela lapha futhi ulethe ulwazi lwakho olubalulekile kwabanye.
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-5 ezedlule rikoooo.
unyaka 1 5 edlule #926 by Gh0stRider203
Aye, okwesibini lokho! Siyakwamukela, futhi ngiyabonga ngesevisi yakho!
Isikhathi ukudala page: 0.303 imizuzwana